Kismaayo News » Kismaayo: Qiil-Ma-Waaye oo dib loo furayo
Kismaayo: Qiil-Ma-Waaye oo dib loo furayo
Kn: Wax u muuqda saansaan rajo weyn oo kasoo ifaysa Kismaayo ayaa waxaa socota hawl dib loogu hawlgalinayo hoteeladii loo dalxiis tagi jirey ee magaalada.
Mid ka mid ah ganacsatadii ugu caansanayd gobolka Jubbada Hoose ayaa muddo dheer kadib dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo, isagoo sheegey in aysan markani wixii ka dambeeya qiil lahayn ka maqnaanshaha Kismaayo.
Ma ahan in uu faromarnaan kusoo laabtay, ee Suldaan Maxamuud Siciid Faarax Qiil-Ma-Waaye waxa uu dalka kula soo laabtay maalgalin weyn oo uu Kismaayo ku samaynayo.
Intiina aqoonta u leh, Suldaan Qiil-Ma-Waaye waxa uu dib u dayactirayaa hoteelkii xeebta Calanleey ku yiiley ee loo yaqaanay Qiil-Ma-Waaye Golden Beachn Hotel, halkaasi oo markii KismaayoNews ay booqatay ay ka socotey hawl dhismo ah oo xawli ku socotay.
Mar uu la hadlay suldaanka bogani waxa uu yiri ‘Waxaan dib ugu soo laabtey dalkeeygii, anigoo doonaya in aan ka qeybqaato dib u heshiisiinta, nabadeynta, dib u dhiska dalka, iyo waliba soo celinta bilicdii ay mar Kismaayo lahaan jirtey” ayuu yiri.
“Waxaan idiinkugu bishaareynayaa in dib loo furayo Qiil-Ma-Waaye Golden Beach Hotel, kaasi oo fulin doono adeegyo kala duwan, noqona doona meel loo dalxiis tago” ayuu yiri Qiil-Ma-Waaye oo ka mid ah ganacsatada caanka ah ee dalka dib ugu soo laabatay, isagoo ka yimid dalka Denmark.
Daraasiin shaqaalo dhismaha ah ayaa hawlo dib u dayactir ah ka wada gudaha iyo banaanka hoteelka oo sida aad aragtaan uu burbur xoogani soo gaaray, waxaana la sheegey in hoteelka uu furmi doono mar aan sidaasi u fogeyn.
Wuxuu noqon doonaa hoteelkii ugu horeeyey oo laga furo xeebta magaalada Kismaayo, kaasi oo dadka degen ay galaangal toos ah u yeelan doonaan xeebta oo dabaal iyo nasiinabada loo tagi doono.
Hotelo kuwan oo kale ah ayaa bilihii lasoo dhaafay laga furey magaalada Xamar ee caasimada ah, gaar ahaan xeebaha Liido iyo Jaziira.
Qiil-Ma-Waaye waxa uu rajaynayaa in dadka kalana ay isaga ku daydaan oo ay dalka dib ugu soo laabtaan, islamarkaasina maalgashadaan.
Hoteelka cusub waxa uu astaan u yahay rajo cusub oo kasoo muuqata Kismaayo, xili kumanaan dad ah ay dib ugu soo laabanayaan.
Rajadani ayaa waxa ay imanaysaa xili magaalada laga saaray kooxihii heystey, islamarkaasina haatan lagu hawlan yahay in la dhiso maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Intii uu burburka jirey waxaa naloo sheegey in dhowr jeer ay jireen isku dayo uu ganacsadanahi uu isaga iibin lahaa dhismahani taariikhiga ah, balse amaanka iyo nabada la heley, ma jiro qiimo uu dhaafsanayo haatan.
W/D: Cabdinaasir Axmed Sh. Bashiir
Sawirqaadayaal : Cabdiqadar Sulub/ Cali Xuseen Xassan